SP-G10 180ml ရော်ဘာသစ်သားဖန်ခွက် Ultrasonic ရနံ့ကုထုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီပျံ့နှံ့, တရုတ် SP-G10 180ml ရော်ဘာသစ်သားဖန်ခွက် Ultrasonic ရနံ့ကုထုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီပျံ့ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ, စက်ရုံ - Sunpai Industries Limited
SP-G10 180ml ရော်ဘာသစ်သားဖန်ခွက် Ultrasonic ရနံ့ကုထုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: တစ်လလျှင် 50000 အပိုင်းပိုင်း
180ml ဝါးဖန်ခွက် Ultrasonic ရနံ့ကုထုံးပျံ့
1.Real Bamboo Finish နှင့် Sleek ဒီဇိုင်း - ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးသဘာဝအတိုင်းကြည့်လျှင်ပျံ့နှံ့လွယ်ကူသော ၀ ါးဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးပါးလွှာသောအကာအကွယ်ဖြစ်သောယွန်းအင်္ကျီဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။
၂။ လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဖန်သားမျက်နှာပြင် - အပြင်ဘက်တွင်ထူးခြား။ အထူးဖန်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပရီမီယံလိုအပ်သောရေနံပျံ့နှံ့မှုနှင့်ပတ်သက်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တူညီသောအလွန်မြင့်မားသောအဆင့်မြင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောပစ္စည်းများအပြင်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု မှလွဲ၍ မည်သည့်အရာကိုမဆိုအသုံးပြုသည်။
3. ပူနွေးသောအဝါရောင်တိတ်ဆိတ်သောညအလင်းရောင် - ဤ Ultrasonic ပျံ့နှံ့မှုသည်သင့်အတွက်သက်တောင့်သက်သာရှိသော & ရင်ခုန်စရာပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးပေးသည်။ ၎င်းကိုသင်၏ (သို့) သင့်ကလေး၏အခန်းထဲသို့ထည့်ပြီးငြိမ်သက်စွာအိပ်စက်နိုင်ရန်ညအလင်းရောင်အဖြစ်အသုံးပြုပါ။
4. အတွေးအမြင်အရှိဆုံးဖန်တီးမှုလက်ဆောင် - ဒီဖန်ခွက်ရနံ့ကုထုံးဖြန့်ဖြူးသူသည်အထူးဒီဇိုင်းရှိပြီးသင့်ဆွေမျိုးများနှင့်မိတ်ဆွေများကိုအံ့အားသင့်စေပြီး၊ ရနံ့ကုထုံးနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီ၏ကုထုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။
၅ ။ သင်သို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်စက်ကိုမည်သည့်ထိခိုက်မှုမှမဖြစ်စေရန်စိတ်မပူပါနဲ့။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် -
ပစ္စည်း ဖန်ခွက် + ဝါး + PP
အလင်း ပူနွေးသောအဝါရောင်တောက်ပ / အားနည်း / အသက်ရှူ
ယူနစ်အရွယ်အစား Φ127 * 138mm
အရောင်သေတ္တာအရွယ်အစား 157 * 157 * 187mm
စက္ဏူထူအရွယ်အစား 49 * 33 * 39CM
ကဘ / သေတ္တာများ ၉.၂ ဂစ်
GW / ပုံး 9.8kgs